रवीन्द्र मिश्रको प्रश्नः के राष्ट्रपति ‘ओली गुट’ का नेता हुन् ?
साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सिंगो गणतन्त्रको खिल्ली नउडान आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला कदमप्रति असन्तुष्टि देखिएका मिश्रले माइक्रोब्लग ट्वीटरमा बुधबार साँझ प्रश्न सोधेका छन्- के राष्ट्रपति ‘ओली गुट’ का नेता हुन् ?
राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन एमाले नेता हुन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट गठन भएको नेकपा अहिले सत्तामा छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा बिहीबार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्।
सरकारले सभामुख र प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको र त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मिश्रले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
मिश्रले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, ‘होइनन् भने बारम्बार राष्ट्रपतिले ओली गुटका नेताको जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ? राष्ट्रपति गणतन्त्रका गहना हुन्।’
राष्ट्रपति संविधानका पालक र रक्षक रहेको स्मरण गराउँदै मिश्रले राष्ट्रपति ‘ओलीलाई संकटबाट बचाउने साधन होइनन्। सिंगो गणतन्त्रको खिल्ली नउडाऊँ’ भनेका छन्।
वर्षौँ विते र अहिले महिनौँ वित्दैछ। नेताहरू 'राजकाज'को ढङ्गमा होइन 'राजनीति'को फोहोरी रङ्गमा पौडिरहेका छन्। कोरोनाको चौतर्फी असरबारे चिन्ता छैन। 'चिन्ता गरिदेऊ न बाबा' भनेर अनशन बसेका युवाबारे चिन्ता छैन। चिन्ता केवल कुर्सीको छ। जनताले अब भन्नै पर्छ: अबको चुनावमा मैले जान्याछु!